Askari la diriray burcad-badeeda Soomaaliya oo loo xukumay dhac Bangi
Askari la diriray burcad-badeeda Soomaaliya oo xukun lagu ridday
Spencer Sebastiampillai oo 46-jir ah ayaa lagu xukumay afar sano oo xarig ah.
TORONTO, Canada – Darawal ka tirsanaa ciidamadda badda Canada ayaa sheegay in naxdin uu ka qaadey la dagaalanka burcad-badeeda Soomaaliya ay sabab u tahay in uu qabatimo fal-dambiyeedyadda, sidda ay qortay saxaafadda.
Spencer Sebastiampillai oo 46-jir ah ayaa hadalkaas ka sheegay maxkamad ku taala gobolka Ontario halkaasoo uu kasoo muuqdey isagoo ku eedeysan dhac uu ka geystay bangi maxlai ah sanadkii hore ee 2019-kii.
Sidda ay warisay saxaafadda Canada, eedeysanaha ayaa mudadii u dhaxeysay 2000 illaa 2001-dii wuxuu qeyb ka ahaa howlgalka Qaramada Midoobay ee la dagaalanka shufta badeeda Soomaalida ah.
Qareenkiisa Terrance Luscombe oo si lamid ah tibaaxay in kalyeentigiisa uu si lamid ah kasoo qeyb-qaatay musiibada diyaaradii Swiss Air ee 1998-dii ayaa xusay in uu wajahay shufta badeed aad u hubeysan.
"Wuxuu ka qeyb-qaatay daad-gureynta burburka diyaaradda Swiss Air halkaasoo ay ku geeriyoodeen 229 rakaab iyo shaqaalaheeda, wuxuuna ka qaadey naxdin badan," ayuu u sheegay xeer-beegtadda.
Iyaddoo aqbashay dhamaan dhibaatooyinka uu la kulma eedeysanaha, garsooraha maxkamadda haweenayda lagu magacaabo Colette Good ayaa ku xukuntay muddo afar sano oo xabsi ku hayn ah.
"Xataa hadii aadan hub waddan, in aad dhac u geysato bangi waa fal-dambiyeed khatar ah," ayay ku dartay, iyaddoo hoosta ka xariiqay in shaqaalaha bangiga ay saacadihii weerarka socday ay walwaleen.
Bishii November 21-keeda, sanadkii hore 2019 ayay ahayd markii xukunsaha uu ku kacay falkaas. Muuqaalo ay duubeen kaamirooyinka qarsoon waxay tusiyeen isagoo xiran ookiyaale oo shan kun Doolar u waydiinaya shaqalaha Bangiga.
Musharaxa ayaa sheegay in Puntland aysan wali gaarin hadafkii loo aas-aasay oo ay jiraan...
Cabdullaahi Cilmi oo ka badbaaday in laga soo tarxiilo Canada
Caalamka 24.08.2019. 14:38
Olale lagu badbaadinayo Soomaali qarka u saaran in la tarxiilo oo socda
Soomaliya 20.08.2019. 12:31
Canada oo xukun ku riday Soomaali afduubey Wariye caan ah
Caalamka 19.06.2018. 11:00
Soomaaliya oo sabab u noqotay dib u dhigista kiiska dil ka dhacay Canada
Afrika 31.10.2019. 15:38
Askari reer Canada ah kana howlgalay Soomaaliya oo la maxkamadeeyay
Caalamka 07.10.2020. 09:10